Lanitra (finoana) : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Lanitra (finoana) : Fahasamihafan'ny versiona roa
Lanitra (finoana) (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Septambra 2019 à 08:23
113 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 2 Septambra 2019 à 11:52 (hanova)
Endrika tamin'ity 3 Septambra 2019 à 08:23 ity (hanova) (esory)
Ny '''lanitra''' ao amin'ny fivavahana maro dia ny toerana misy ny [[fiainana mandrakizay]] ho an'ireo olom-boafidy aorian'ny fahafatesana. Indraindray ny lanitra dia atao hoe [[Paradisa|''paradisa'']]. Ny lanitra na ny paradisa dia toerana amalian-tsoa ireo olona nitondra tena tsara teto an-tany, izany hoe nanaraka ny toromariky ny fivavahana milaza ny fisian'izany. Ny mifanohitra amin'izany dia ilay toerana ametrahana ireo izay tsy nanaraka izany didy izany, dia ireo izay nanda na tsy nofidin'Andriamanitra.
Amin'ny fivavahana tamin'ny [[Andro Taloha]] dia inoana fa fitohizan'ny fiainana eto an-tany ny fiainana aorian'ny fahafatesana, nefa ny aloka no ho ao amin'izany fiainanana aorian'ny fahafatesana izany. Ny lanitra na ny paradisa dia toerana amalian-tsoa ireo olona nitondra tena tsara teto an-tany, izany hoe nanaraka ny toromariky ny fivavahana milaza ny fisian'izany. Ny mifanohitra amin'izany dia ilay toerana ametrahana ireo izay tsy nanaraka izany didy izany, dia ireo izay nanda na tsy nofidin'Andriamanitra.
== Ny lanitra ao amin'ireo fivavahana politeista ==
=== Ny lanitra ao amin'ny fedrafedrà grika sy romana ===
Ao amin'ny fedra[[fedrà]] grika sy romana dia ''Elosiona pediona'' (grika: ''Ἠλύσιον πεδίον / Êlúsion pedíon)'' no ilazana ny toerana amalian-tsoa ireo ireo olona maty nefa nanao soa fahavelony, fa Tartarosy (grika: ''Τάρταρος'' / ''Tártaros'') kosa no toerana voaozona anasaziana ny ratsy fanahy fahavelony.
=== Ny lanitra ao amin'ny fivavahana politeista hafa ===
Ny paradisa ao amin'ireo fivavahana [[Politeisma|politeista]] taloha dia ninoana fa toerana itohizan'ny fisitrahan'ny olombelona ny fahafinaretan'ny fiainana teto an-tany aorian'ny fahafatesany. Ny ''Walhalla'' araka ny finoan'ny Alemàna sy ny Skandinaviana taloha dia toy izany. Toy izany koa ny fihazana tsy manam-pahataperana ao amin'ny paradisan'ny finoan'ny Indiana tany [[Amerika Avaratra]].
== Ny lanitra ao amin'ny fivavahana monoteista ==
Ny fivavahana [[Monoteisma|monoteista]] fantatra indrindra fa miresaka ny amin'ny lanitra amin'ny maha toerana famalian-tsoa ny olo-marina dia ny [[jodaisma]] sy ny [[kristianisma]] ary ny [[finoana silamo]].
=== Ny lanitra ao amin'ny jodaisma ===
Ao amin'ny [[Tanakh|Soratra Masina jiosy]] dia atao hoe ''Seola'' (hebreo: שאול / ''sheol'') no fiantsoana ny toerana itoeran'ny maty. Mihevitra ny [[Jiosy]] taloha sasany fa ny paradisa dia ao amin'ny faritra fiton'ny lanitra, ary misy fanantenana hialana avy ao amin'ny Seola mba hiverina hiaina indray eto an-tany na any an-danitra.
Ao amin'ny lovantsofina jiosy, ny hoe paradisa dia tsy inona fa ny [[Mesianisma|fanantenana mesianika]] momba ny tany "todra-dronono sy tantely", na ny ""Tany nampanantenaina diaizay tandindon'ny tena paradisa. Fiteny koa ny hoe "eo an-tratran'i Abrahama" izay anondroana ny toerana honenan'ny olo-marina. Nandritra ny [[fahababoana tany Babilona]] dia nampifanaikezinanampifanakekezina amin'ny Tempoly (izay tsy misy fa noravan'ny Babiloniana) ny paradisa, araka ny hita ao amin'ny [[Bokin'i Ezekiela]] (Ezek. 47), avy eo dia nosoloana amin'ny atao hoe "famoronana vaovao" izany ao amin'ny [[Bokin'i Isaia]] (Isaia 41 sy 43).
Ao amin'ireo [[Apokrifan'ny Baiboly|soratra apokrifa]]<nowiki/>n'ny [[Testamenta Taloha]] no tena nahitana firesahana amin'ny antsipiriany kokoa, indrindra ao amin'ny [[Bokin'i Henoka]] (na Enoka), izay manoritsoritra ny firafitry ny paradisa, sady milaza azy ho toerana onenan'ny olo-marina.
=== Ny lanitra ao amin'ny finoana silamo ===
Ao amin'ny boky masin'ny Silamo, dia ny [[Kor'any|Kor'any,]] dia ahitana ny atao hoe "lanitra fito" izay misy dingam-boninahitra tsy mitovy, ka ny fahafito no fitoeran'ny Avo Indrindra, ary ny volohanyvoalohany dia inyny farany ambany indrindra amin'ny lanitra, itoeran'ny fahafaham-po ahitana ny fara tampon'ny fahafinaretan'ny tany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/973797"